November 22, 2020 - Achawlaymyar
ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်အောက်မည် ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ဘဲ ကိုဗစ်ကူးစက် အပေါ် မူတည်၍ ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်နိုင်ရန် စီစဉ် နေကြောင့် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ပြော ကြားသည်။ စာသင်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ရန် လောလောဆယ်တွင် အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲနေပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကိုလေးဝင်းက ဆိုသည်။ “ဖွင့်နိုင် မဖွင့်နိုင်ဆိုတာ ချက်ချင်းကြီး ကောက်ပြောလို့ မရဘူးလေ။ ကိုဗစ်ကူးစက် မှုအပေါ် မူတည်တယ်။ အခု လောလော ဆယ်ကတော့ စောင့်ကြည့်ဆဲ ကာလလို့ပဲ ပြောလို့ရတယ်။ လောလောဆယ် အစီအစဉ် ဆွဲတာတွေတော့ လုပ်နေကြတယ်။အချိန် မှာတော့ မထုတ်ပြန်သေးဘူး။ ထုတ်ပြန်တဲ့ အချိန်အသိပေးလိုက်မယ်” ဟု ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ပြောသည်။ စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ထားရသော ကြောင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ … Read more
မနေ့က ကျမဆေးခန်းကို ultrasound ကြည့်ဖို့သားအမိနှစ်ယောက်လာပါတယ် သူတို့သားအမိဝင်လာတုန်းကတော့..ရင်သားတဖက်မရှိ တဲ့ မိခင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း.လူနာလို့ထင်မိတာပါ။ နောက်တော့မှ..ကျမသမီးလေးရာသီ မလာတာ 3လလောက်ရှိပြီ..ဗိုက်မှာလည်း အလုံးပေါ်နေလို့ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကိုစပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့..ဗိုက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်က 5လပြည့်ခါနီးပါပြီ..း။ ကလေးရဲ့ အသက်ကိုသေချာသိချင် လို့မွေးနေ့မေးလိုက်မှ 13နှစ်နဲ့ တစ်လ..ဗိုက်ထဲက ကိုယ်ဝန်က 5လ.. .ရှင်းရှင်းပြောရရင်.အမွှေးတောင်သေချာမပေါက်သေးတဲ့ .မျက်နှာ အေးအေးလေးနဲ့ ကလေးကိုကြည့်ပြီး ကျမ ဘယ်ကနေ စပြောရမလည်းတောင်တွေးမရတော့ပါ မတတ်နိုင်အမေကိုရှင်းပြတော့ပြီး.သမီးရည်းစား ရှိသလားချော့မေးတော့..ရည်းစားတော့မရှိ… အပျိုမဟုတ်တဲ့ အဆောင်နေသူငယ်ချင်း ဆီကဘောင်းဘီယူဝတ်မိ သည်ဟုပြောသည်..လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး..အမှန်အတိုင်းပြောဖို့နည်းနည်းလေး မာန်လိုက်တော့..မှ.တတန်းထဲနေ.သူငယ်ချင်း နှင့်. .ဟုဝန်ခံလာလေသည် fbပေါ်မှာ ဟိုတလောကေ ခတ်စားနေတဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုယ်ဝန်ခုနှစ်ယောက်ရတဲ့. မဟုတ်တဲ့ post ကို ဖတ်ပြီး..အမေကို..ဘောင်းဘီ ကိစ္စနှင့်ဖြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်အမေက သို့လောသို့လော ဖြစ်သည် ဒီအမေနှင့် လွှတ်ထားလို့မပြီး..ငါဝင်ပါမှ ဖြစ်မည် ဆိုပြီး ဆက်မေးမှ..ကျမ … Read more